डाउनलोड गर्नुहोस् Google Meet APK को लागी Android
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Android (44.58 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Google Meet,
Google Meet को बारेमा सबै विवरणहरू प्राप्त गर्नुहोस्, सफ्टमेडलमा, Google, संसारको सबैभन्दा ठूलो खोज इन्जिनद्वारा विकसित गरिएको व्यापार-उन्मुख भिडियो कन्फरेन्सिङ उपकरण। Google Meet एक भिडियो कन्फरेन्सिङ समाधान थियो जुन Google द्वारा व्यवसायहरूलाई विशेष रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। यसलाई 2020 मा नि:शुल्क बनाइएको थियो ताकि यसलाई सबै प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्न सकून्। त्यसोभए, गुगल भेट भनेको के हो? गुगल भेट कसरी प्रयोग गर्ने? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ तपाईंले हाम्रो समाचारमा पाउन सक्नुहुन्छ।
Google Meet डाउनलोड गर्नुहोस्
Google Meet ले दर्जनौं फरक व्यक्तिहरूलाई एउटै भर्चुअल बैठकमा सामेल हुन अनुमति दिन्छ। जबसम्म तिनीहरूसँग इन्टरनेट पहुँच छ, मानिसहरूले एक अर्कासँग कुरा गर्न वा भिडियो कल गर्न सक्छन्। Google Meet मार्फत बैठकमा उपस्थित सबैसँग स्क्रिन साझेदारी गर्न सकिन्छ।
Google Meet भनेको के हो
Google Meet गुगल द्वारा विकसित एक व्यापार-उन्मुख भिडियो सम्मेलन उपकरण हो। गुगल मीटले गुगल ह्याङ्गआउट्स भिडियो च्याटहरू प्रतिस्थापन गर्यो र उद्यम प्रयोगको लागि नयाँ सुविधाहरूको एक होस्टको साथ आयो। प्रयोगकर्ताहरूले २०२० देखि Google Meet मा निःशुल्क पहुँच प्राप्त गरेका छन्।
Google Meet को नि:शुल्क संस्करणमा केही सीमितताहरू छन्। नि: शुल्क प्रयोगकर्ताहरूको बैठक समय 100 सहभागीहरू र 1 घण्टामा सीमित छ। यो सीमा एक-बाट-एक बैठकहरूको लागि अधिकतम 24 घण्टा हो। Google Workspace Essentials वा Google Workspace Enterprise खरिद गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई यी सीमितताहरूबाट छुट दिइन्छ।
गुगल मीट कसरी प्रयोग गर्ने?
Google Meet यसको प्रयोगमा सहजताका लागि परिचित छ। तपाईंले केही मिनेटमा Google Meet कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्न सक्नुहुन्छ। बैठक सिर्जना गर्ने, बैठकमा सामेल हुने र सेटिङहरू समायोजन गर्ने काम एकदमै सरल छ। तपाईलाई कुन सेटिङ र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्न आवश्यक छ।
वेब ब्राउजरबाट Google Meet प्रयोग गर्न apps.google.com/meet मा जानुहोस्। शीर्ष दायाँ तिर ब्राउज गर्नुहोस् र बैठक सुरु गर्न "बैठक सुरु गर्नुहोस्" वा बैठकमा सामेल हुन "बैठकमा सामेल हुनुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
आफ्नो जीमेल खाताबाट गुगल मीट प्रयोग गर्न, वेब ब्राउजरबाट जीमेलमा लग इन गर्नुहोस् र बायाँ मेनुमा रहेको "बैठक सुरु गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
फोनमा Google Meet प्रयोग गर्न Google Meet एप डाउनलोड गर्नुहोस् (Android र iOS) र त्यसपछि "नयाँ बैठक" बटनमा ट्याप गर्नुहोस्।
तपाईंले बैठक सुरु गरेपछि, तपाईंलाई एउटा लिङ्क प्रस्तुत गरिन्छ। तपाईं यो लिङ्क प्रयोग गरेर बैठकमा सामेल हुन अरूलाई आमन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँलाई बैठकको लागि कोड थाहा छ भने, तपाइँ कोड प्रयोग गरेर बैठकमा लग इन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, तपाईं बैठकहरूको लागि प्रदर्शन सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
Google Meet Meeting कसरी बनाउने?
Google Meet मार्फत बैठक सिर्जना गर्न एकदम सजिलो छ। यद्यपि, अपरेसनहरू प्रयोग गरिएको उपकरणको आधारमा भिन्न हुन्छन्। तपाईं आफ्नो कम्प्युटर वा फोनबाट निर्बाध रूपमा बैठक सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईले पछ्याउनु पर्ने कुरा एकदम सरल छ:
कम्प्युटरबाट बैठक सुरु गर्दै
1. आफ्नो कम्प्युटरमा वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र apps.google.com/meet मा लग इन गर्नुहोस्।
2. देखा पर्ने वेब पृष्ठको शीर्ष दायाँमा रहेको निलो "बैठक सुरु गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
3. तपाईंले Google Meet प्रयोग गर्न चाहनुभएको Google खाता चयन गर्नुहोस् वा यदि तपाईंसँग छैन भने Google खाता सिर्जना गर्नुहोस्।
4. लग इन गरेपछि, तपाइँको बैठक सफलतापूर्वक सिर्जना गरिनेछ। अब मिटिङ लिङ्क प्रयोग गरी मानिसहरूलाई आफ्नो Google Meet बैठकमा निम्तो दिनुहोस्।
फोनबाट बैठक सुरु गर्दै
१. तपाईंले फोनमा डाउनलोड गर्नुभएको Google Meet एप खोल्नुहोस्।
2. यदि तपाइँ एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको खाता स्वचालित रूपमा लग इन हुनेछ। यदि तपाइँ आईफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको सम्बन्धित Google खातामा लग इन गर्नुहोस्।
३. Google Meet एपमा रहेको "मिटिङ तुरुन्तै सुरु गर्नुहोस्" विकल्पमा ट्याप गर्नुहोस् र बैठक सुरु गर्नुहोस्।
4. बैठक सुरु भएपछि, बैठक लिङ्क प्रयोग गरी मानिसहरूलाई आफ्नो Google Meet बैठकमा आमन्त्रित गर्नुहोस्।
गुगल मीटका अज्ञात सुविधाहरू के हुन्?
Google Meet बैठकहरूबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन तपाईंले केही महत्त्वपूर्ण सुविधाहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू यी सुविधाहरूसँग परिचित छैनन्। यद्यपि, यी सुविधाहरू सिकेर, तपाइँ एक विशेषज्ञ जस्तै Google Meet प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
नियन्त्रण सुविधा: तपाईंले कुनै पनि Google Meet बैठकमा सामेल हुनु अघि अडियो र भिडियो नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। बैठक लिङ्क प्रविष्ट गर्नुहोस्, लग इन गर्नुहोस् र भिडियो अन्तर्गत "अडियो र भिडियो नियन्त्रण" मा क्लिक गर्नुहोस्।
लेआउट सेटिङ: यदि तपाईंले Google Meet बैठक सिर्जना गर्नुभएको छ र धेरै मानिसहरू उपस्थित हुनेछन् भने, तपाईं बैठक दृश्य परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जब बैठक खुला हुन्छ, तलको "तीन थोप्लाहरू" आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि "लेआउट परिवर्तन गर्नुहोस्" विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
पिनिङ सुविधा: धेरै व्यक्तिहरूसँगको बैठकहरूमा, तपाईंलाई मुख्य वक्तामा ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या हुन सक्छ। मुख्य स्पिकरको टाइलमा पोइन्ट गर्नुहोस् र यसलाई पिन गर्न "पिन" मा क्लिक गर्नुहोस्।
रेकर्डिङ सुविधा: तपाईंले आफ्नो Google Meet बैठकलाई अन्यत्र प्रयोग गर्न वा पछि फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जब बैठक खुला हुन्छ, तलको "तीन थोप्लाहरू" आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि "बैठक बचत गर्नुहोस्" विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि परिवर्तन: तपाईंसँग Google Meet बैठकहरूमा पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्ने अवसर छ। तपाईं पृष्ठभूमिमा छवि थप्न वा पृष्ठभूमि धमिलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी, तपाईं जहाँ भए पनि, क्यामेरा छविमा तपाईंको अनुहार मात्र देखिने कुरा सुनिश्चित गर्नुहुन्छ।
स्क्रिन साझेदारी: स्क्रिन साझेदारी बैठकहरूमा धेरै उपयोगी हुन सक्छ। तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटर स्क्रिन, ब्राउजर विन्डो, वा ब्राउजर ट्याब बैठक सहभागीहरु संग साझा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको तलको "अप एरो" चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् र चयन गर्नुहोस्।
के तपाईंलाई Google Meet को लागि Google खाता चाहिन्छ?
Google Meet प्रयोग गर्नको लागि तपाईंलाई Google खाता चाहिन्छ। यदि तपाईंले पहिले Gmail खाता सिर्जना गर्नुभएको छ भने, तपाईं यसलाई सीधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि, Google ले खाताहरूको प्रयोगलाई अन्त्य-देखि-अन्त इन्क्रिप्सन गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाइँसँग गुगल खाता छैन भने, तपाइँ सजिलै संग नि: शुल्क बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने तपाईंले Google Meet बैठकहरू Google Drive मा सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। सबै रेकर्ड गरिएका बैठकहरू इन्क्रिप्टेड छन् र तपाईं आफ्नो सम्बन्धित Google खाता बाहिर पहुँच गर्न सक्नुहुन्न।
Google Meet चश्मा
फाईल आकार: 44.58 MB
पछिल्लो अद्यावधिक: 21-04-2022